Isicwangciso seNtengiso esisekwe kwiAkhawunti lixesha elizayo, kwaye iGroove ilapha kuyo | Martech Zone
Xa kuziwa kwintengiso yesoftware ye-SaaS, ukujolisa kubantu abathile akuyiyo imodeli yokusebenza kakuhle. Emveni kwakho konke, umyinge wabantu abayi-5.4 bayabandakanyeka kwisigqibo sokuthengisa seshishini elinye. Ngenxa yokuba ukuvavanywa okusekwe kwiqela kuyinto eqhelekileyo, Intengiso esekwe kwiakhawunti (ABS) inemveliso ngakumbi kunokujolisa kukhokelo oluthile.
Indlela esekwe kwiakhawunti yokuthengisa, nangona kunjalo, inokudla ixesha. Ukulandelela ubunzulu beemetriki kunye namaxesha kwiithagethi ezininzi, kunye nokusebenzisana kolo lwazi kumaqela angaphakathi, uziva ngathi akunakwenzeka ngaphandle kokuba uyakwazi umbutho ofana nekhompyuter. Isisombululo? Ukuzisebenzisela ukuthengisa.
Ngeentsuku zam ndisebenza kwintengiso kuGoogle, ndiye ndafumanisa ukuba ndifuna umncedisi okrelekrele oza kulandelela onke amaxesha am, iipateni kunye nezikhumbuzo ngaphandle kwam. Ekugqibeleni, bendidinga into eza kundinceda ndifumane i-groove yam ukuze ndihlale ndixakekile ndisebenza icandelo lomntu lokuthengisa. Ngelo xesha uGroove, iqonga lokunika amandla ukuthengisa, wazalwa.
Into onokuyenza ngeGroove
Ekwenzeni inkqubo yokuthengisa ibe lula kwaye ikrelekrele, iGroove idiliza amandla ayo kwiindawo ezintathu. Ngokuzenzekelayo umsebenzi wobufundisi ongenangqondo kuwo onke amanyathelo ohambo, iGroove ikwafaka idatha ebalulekileyo ukukunceda uthengise ngobukrelekrele kwixesha elizayo, ngakumbi kwabo balandela izicwangciso zeABS.
Vumelanisa: Qonda yonke into eyenzekayo kwintengiso yendalo
Umjikelo wentengiso umde nge-ABS, kwaye oko kuthetha ukuba iimetrikhi ezingaphezulu zokulandela ixesha elide. Ukuze ugcine ukujonga kwamehlo kwentaka kuyo yonke le nkqubo, ukulandelela kunye nokuhlalutya iimetwork kakuhle kwaye ngokukhawuleza kubalulekile.
IGroove ithimba lonke uhlobo lokufikelela kwimetrikhi, kuyo yonke i-imeyile ethunyelweyo neyamkelweyo kuyo yonke iminxeba ethe yatsalwa yabuya. Ukufakwa kwale datha kuvumela iGroove ukuba ichonge ukuba zeziphi izicwangciso zokufikelela ezisebenza kakuhle ukufikelela kumathemba akho.
Ngokwesiko, abathengisi kuya kufuneka benze isigqibo esifanelekileyo sokudibanisa idatha kwaye bachithe ixesha besenza ingqiqo yokufumana ezona zicwangciso kunye namaxesha asebenza kakuhle. Ukuqonda okunokukuhambisa kubalulekile, kodwa ixesha lotyalo-mali alifanele. IGroove ithatha inkunkuma yexesha ngaphandle kombuzo kwaye ivumela abathengisi ukuba bakhanye ngesicwangciso esikwinqanaba eliphezulu ngelixa iphatha uhlalutyo lwegranular.
Ukuhamba: Qhuba inkqubo engqinelanayo
Ukubeka phambili ngokubaluleka kubalulekile xa kuziwa kwi-ABS ngenxa yevolumu ephezulu yexesha kunye nezixhobo eziyifunayo. Abaqeqeshi bezentengiso kufuneka babenakho ukukhetha ukuba yeyiphi imikhankaso kunye nemibutho abafuna ukuyibeka phambili kuncedo lwabo, kodwa ngemibutho emininzi ekujoliswe kuyo ngaxeshanye, kulula ukoyiswa lilo lonke ixesha lokungena.
I-Groove ilwa nomzabalazo ngokwamandla ayo okulungelelanisa iinkqubo eziphindaphindayo. Iimpawu zayo zikuvumela ukuba wenze imigaqo-nkqubo yokuzikhumbuza ngokuzenzekelayo yokwenza unxibelelwano kunye nethemba lakho. Umzekelo, unokuyixela le nkqubo, "Ngazo zonke izikhokelo ezisekwe kwiakhawunti, ndikhumbuze ukuba ndifikelele kwiintsuku ezintlanu emva kokuba bangene kwinkqubo, emva koko ubongeze kwiLinkedIn kwiintsuku ezintlanu emva koko," ude ube nesakhelo sonke esifakwe isoftware. Endaweni yokuthatha ixesha lokugcwalisa izikhumbuzo zakho ze-iPhone okanye iKhalenda yakho kaGoogle, iGroove isebenzisa imigaqo yakho ekhokelayo nganye entsha.
Ishedyuli: Fikelela kwimveliso esulungekileyo
Okukhona abantu bebandakanyeka kwintengiso, kokukhona kufuneka uqiniseke ngakumbi ngengqondo. Ke ngoko, kubaluleke ngakumbi ukuba ube nexesha lokujongana nomntu ngamnye obandakanyekayo ukuze ulungelelanise umyalezo wakho nomdla ngamnye. Ngaphandle kwesixhobo sokucwangciswa ngobuchule, lixesha elininzi kunye ne-imeyile efunekayo.
Imveliso yemveliso yeGroove ijongana ngqo nenqaku lokucwangciswa kwentlungu. Abaxhasi bayakwazi ukubona ikhalenda yakho kunye nokufumaneka ukubhukisha ixesha ngokuthe ngqo. Oku kusika i-imeyile umva-kunye-nokuxoxa malunga nokukhetha ixesha, ngakumbi xa ujolise kubantu abaninzi kumbutho omnye ababandakanyekayo kwintengiso.
Ubuchule bokucwangciswa kweGroove buvumela i-reps kwakhona ukuba icwangcise i-imeyile ukuba ithunyelwe kwelona xesha lifanelekileyo kwaye ibone ukuba ii-imeyile zivulelwa umbono wokubandakanya. Amaqhinga emva koko anokutshintshwa ngokolwazi ngokususelwa kwinto esebenzayo kunye nengasebenziyo, evumela abakwa-reps ukuba bafumane ibhalansi efanelekileyo kwaye baqhubeke nomsebenzi wabo ngokukhawuleza okukhulu, ukuvala ukuthengisa ngakumbi kunye nokufumana imali eninzi.
Yahluke njani iGroove?
IGroove kuphela kwesisombululo sentengiso esenzelwe yonke into kwintengiso enokuthi yenziwe ngokwezifiso kwiqela lakho lonke lokuthengisa. Ngelixa uninzi lwezisombululo lusebenza kwinqanaba elinye kuphela leqela lakho, abathungi beGroove kwindima yakhe nabani na - ukusika isidingo senkcitho kwizixhobo ezininzi ezahlukeneyo kunye nokukhwela kwabasebenzi ukuya kwabatsha xa bonyuselwa.
Ukubhabha umbutho wakho eGroove yinkqubo elula engayi kuthatha ngaphezulu kweeyure ezimbalwa. Ngeseshoni yoqeqesho olunzulu, iqela lethu lingakubonisa ukuba ungayenza njani inkqubo ngokwezifiso zakho. Nokuba ithini na iqela lakho elinabathengisi abali-10 okanye abali-1,000 XNUMX, ukunyuka kwamava kuyinto egudileyo.
Njengoko abantu abaninzi bethatha inxaxheba kwi-SaaS yokuthenga izigqibo, inkqubo yentengiso kufuneka yenziwe lula ngenxa yomthengisi kunye nomthengi. IGroove inezinto zayo ezibekwe kwindawo yentengiso esekwe kwiakhawunti kwaye ifuna ukuyenza inyani.
tags: EngekhoUkuthengisa okusekwe kwiakhawuntiemseleniUkunika amandla ukuthengisauhambo lokuthengisaUmbhobho wokuthengisaukuthengisa